Top 10 jaraya MKV Free in yaree MKV Faylal ay laba qaybood
Haddii aad files MKV aan la kulmo inta uu le'eg yahay sida aad doonayso inaad, dhererka ama tayada, ka dibna aad u baahan tahay si ay u helaan qalab tafatirka. Qalabkani soo haan marka ay timaado jarida videos in jajabkii ka yar iyo baabi'inta filim ama video clips aan la rabin. Si kastaba ha ahaatee, ma dhammaan qalab siin natiijo fiican, maxaa yeelay, ilaa ay set. Sidoo kale, qaar ka mid ah oo kaliya oo aad u qaali ah. Nasiib wanaag, jaraya sare oo lacag la'aan ah waxqabadka waxaa laga heli karaa internet-ka iyo dadka waa in ay u isticmaalaan. Halkan waxa ku jira Top 10 jaraya MKV Free taas oo kuu ogolaaneysaa in aad si deg deg ah ka gooyay files oo aan tirtiro, baddalayso ama dhibaato loo geysan file asalka. Hubi tutorial video hoose si aad u hesho dulmar guud oo deg deg ah xal ugu wanaagsan lacag la'aan ah si ay u dhinto / kala videos hore .
Barnaamijku waa software si xor ah u sahli doona in aad jaray ama la dooxi doontaa marka laga reebo qaabab video jira qaabab AVI. SolveigMM AVI Trimmer + MKV waa lagu kalsoonaan karo sababta oo ah waxa ay haysaa tayo sare leh oo dhalanrog ugu yar. Waa maxay dheeraad ah, interface user waa fudud samaynta dhammaan howlaha la maarayn karo. Habkan, waxa aad maamuli in ay ka gooyay aad video files daqiiqado yar gudahood, iyadoo ay caqabado kasta doonaa. Waxa kale oo aad gali kartaa adiga oo cut video on aad tuubo la isticmaalayo si toos ah software this.
Avidemux ma aha oo kaliya a video ripper lacag la'aan ah, laakiin sidoo kale barnaamij ku biiro. Marka la isticmaalayo, waa in aad eegto, waayo, qaabab taageeray sida MKV, OGM, AVI, FLV, MP4 iyo sidoo kale Mpg. Waxaa muujinayaa xog ay interface iyo dad door bidaan this video qalab goynta ugu fiican. Sidoo kale, waxaad isticmaali kartaa software ku qaabab kale audio iyo video ka menu jiita iyo hoos u dhac ku taalla dhanka bidix ee. Faa'iidada guud ee qalabkan waa in ay taageerto hawlaha caadiga ah ay sabab u tahay xog.
3. Filmora MKV magaabay
The magaabay Filmora MKV waa qalab heer sare ah tageynaa files MKV weyn ee ay u clips ka yar. Its interface aan adag ogolaanin in ay isticmaalaan arday iyo xirfadlayaasha. Waa lagu qanci karo, maxaa yeelay, aad jari karaan faylka si kasta oo cabbirka, oo dherer ah iyo tayo ku xiran tahay waxa aad door bidayso. Waa maxay ka badan, tayada video la yaab leh oo aad sidoo kale horena karaa koobin kala duwan si ay goobaha ku haboon in la abuuro wax soo saarka ah file u wacan. Waxa ay taageertaa ma ahan oo keliya files MKV laakiin weliba tiro balaadhan oo ah qaabab kale video. Sida xaqiiqada ah boqortooyada-free saamaynta muuqaalka iyo maktabadda music idinka badbaadin doonaa waqti badan iyo dadaal in la abuuro ugu fiican ee aad video. Fiiri video hoose si aad u hesho guud-mar ku deg dega ah ee saamaynta muuqaal cajiib ah oo maktabadda music:
Download koobi bilaash ah si aad hadda bilowday:
4. Free Video magaabay Joiner
Barnaamijku wuxuu awood caawiye aad u gooyaa oo markaas ku biiri videos qaabab kala duwan sida MKV. Waxaad si fudud u kala karaa oo ku milmaan files badan ee ka tagaan si ay le'eg loogu talagalay. Marka laga soo tago files dooxeen, software ah uu sidoo kale ogaadaa qaabeynta oo dejiya ku soo koobin ee wax soo saarka si ay u dhigma in ka mid ah talooyin ka. Iyadoo goobaha sida, waxa aad heli doontaa baadi free files of tayo sare leh. Intaa waxaa dheer, in aad la kulmi doonaan xawaare sare goynta iyo xasiloonida ay sabab u sahlan in ay isticmaalaan interface. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijka aanu haysan ah in dhisay video akhristaha iyo baaxadda uu furmo suuqa aan la beddeli karin.
Haddii aad raadinayso ripper video taageera noocyo kala duwan oo files ah, ka dibna VSDC Free Video Editor waa habka ay u tagaan. Marka laga soo tago taageerada ay MKV, waxa ay taageertaa files kale sida Mpg, DAT, AVI, MOV, FLV, MP4 wmv, iyo DIVX. Marka tan la eego, waxaad jari karaa files kala duwan fudud oo degdeg badan. Waxa kale oo la Timaadda Converter video ah oo waa fiican ee hawlaha caadiga ah ilaa iyo inta aad isticmaasho qaab heer sare ah.
Si ka duwan jaraya kale, GilliSoft Video Editor waa xirfad dheeraad ah. Waa xad casri ah, laakiin xirfadlayaasha qaban fudayd. Iyadoo qaababka ay, aad dillaaci kara videos in clips yar oo lagu ogaan hawlaha gudaha. Habkan, oo aad noqon karaa mid sax ah. Waxaad kale oo jiidi karaan faylasha in ay muraayada markaas ku dar saamaynta on inay file iyo wadaag on Facebook, YouTube, iyo qalabka kale ee mobile. Tan ugu muhiimsan, waa inaad si buuxda uga taliso editor iyo aad dubaridi kara codka, waqti iyo previewing.
SolveigMM Video magaabay dillaaci kara kala duwan ee files formatted magaca MKV, WebM, FLV, AVI, MPEG iyo M2TS. Kuwaasi waxay yihiin laakiin qaar ka mid ah qaababka ay caawinayso barnaamijka oo waxaa jira dad badan oo dheeraad ah. Software ayaa ka jaray faylasha sida ay tirada files, xajmiga iyo waqti. Sidoo kale, waxaad isku dari kartaa files badan wada oo la abuuro file weyn shardi ah in qaab waa isku mid. Waxaa si toos ah, googooyaa labada files audio iyo video iyo waa u fududahay in la isticmaalo. Tan ugu muhiimsan, waa mid sax ah oo ay jirto waayi maayo oo tayo leh.
Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo MKV files formatted in AVI iyo Cinwaan qoon gaystay u final videos. Intaa waxaa dheer, MP4 iyo AVI qaabab habboon yihiin. MKV in AVI la Cinwaan uu leeyahay gui fudud (User Interface Graphic) la screen hal. Waa inaad si kastaba ha ahaatee loo soo dajiyo codec CCCP ah qaab dhaqso iyo sax ah.
9. Moo0 Video magaabay
Moo0 Video magaabay aad u fasaxaya in uu badbaadiyo clips ugu fiican ee aad movie ee kala duwan videos oo aan aad waayi doonto tayada ama xawaaraha. Waxaad kala qeybin doonaa videos mar ma gudaha iyo saxsanaantiisa loo sugo. Ka sokow taageeraya files MKV, barnaamijka waa ay awoodaan in ay taageeraan MP4, OGG, TP, OGV, MOV, WEBM, AVI, FLV oo badan. Qalab waa user saaxiibtinimo oo lagu ogaan karaa dhibaatooyinka gudaha ku haynta xasiloonida. Intaa waxaa dheer, waxa ay tahay mid amaan ah sida faylasha aad ma noqon doonto khatar ugu loo bandhigi fayrusyada, spyware iyo furin.
10. cute Video magaabay
Cute Video magaabay waa barnaamij kuwaas oo awood u keeneysaa in uu kala jabiyo videos in jajabkii ka yar. Waxa kale oo aad uga takhalusi karaa kuwa qaybaha aan muhiimka kuu ah. Waxaa taageeri karaan qaabab video badan oo ay ka mid yihiin 3GP, dhexena, RMVB, DAT, VCD / DVD, VOB iyo kuwa kale. Maskaxda ku hay in la isticmaalayo qalab aan faraha doonaa tayada ama heshiis ee files. Interface ayaa sidoo kale yahay mid sahlan oo aan kaa hor imanaya dib u fuliso hawlaha caadiga ah. Just qeexo upka ka iyo soo afjaridda dhibcood si ay u qeexaan waxa aad u baahan tahay.
Dhammaan iyaga ka mid ah waa kuwo xaabada MKV lacag la'aan ah, haddii aad u baahan tahay ka jaraya MKV awood leh laakiin si sahlan loo isticmaalo, isku day Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor). Download version maxkamad free hoos ku qoran.
> Resource > Free > Top 10 Best jaraya MKV Free